I-OneSignal: Faka izaziso ze-Push ngeDeskithophu, i-App, noma i-imeyili | Martech Zone
I-OneSignal: Faka izaziso ze-Push ngeDeskithophu, i-App, noma i-imeyili
NgoLwesine, ngo-Okthoba 25, 2018 NgoLwesine, ngo-Okthoba 25, 2018 Douglas Karr
Inyanga ngayinye, ngithola izivakashi eziyizinkulungwane ezimbalwa ezibuyayo ngokusebenzisa izaziso zesiphequluli esizihlanganisile. Ngeshwa, ipulatifomu esiyikhethile manje iyavalwa ngakho-ke bekufanele ngithole entsha. Okubi kakhulu ukuthi ayikho indlela yokungenisa labo ababhalisile abadala kusayithi lethu ngakho-ke sizothatha isinyathelo. Ngaleso sizathu, bengidinga ukukhetha ipulatifomu eyaziwa kakhulu futhi enesabekayo. Futhi ngiyitholile ku- I-OneSignal.
Akugcini lapho I-OneSignal yenza izaziso zohlelo lokusebenza lweziphequluli, futhi ziyisitolo sokuma esisodwa sezaziso zohlelo lokusebenza ngezicelo zeselula noma nge-imeyili futhi.
Siyini isaziso se-Push?
Iningi lokumaketha kwedijithali lisebenzisa Donsa ubuchwepheshe, lowo umsebenzisi wenza isicelo futhi uhlelo luphendula ngomyalezo oceliwe. Isibonelo kungaba yikhasi lokufika lapho umsebenzisi acela ukulanda. Lapho umsebenzisi ehambise ifomu, bathunyelwa i-imeyili ngesixhumanisi sokulanda. Lokhu kuyasiza, kepha kudinga isenzo sethemba. Izaziso zohlelo lokusebenza ziyindlela esuselwe kwimvume lapho umakethi eqala khona isicelo.
Nazi izibonelo ezimbalwa zezaziso zohlelo lokusebenza:
Izaziso ze-Push Push - Iziphequluli zesimanje zinikeza ithuba loku Phusha isaziso. Kuleli sayithi, ngokwesibonelo, isivakashi sokuqala ngqa siyabuzwa ukuthi singabathumela yini isaziso se-push. Uma bevuma, isikhathi ngasinye lapho sishicilela okuthunyelwe okusha bathola isaziso sedeskithophu.
Izicelo Push Izaziso Push - Izicelo zeselula zingazisa abasebenzisi beselula nge-push isaziso Uhlelo lokusebenza olulodwa lweselula engikujabulela kakhulu ukusebenzisa i- Waze, ngoba ifunda ikhalenda lami futhi ingazisa - ngokuya ngomgwaqo - lapho ngidinga ukuhamba ukuze ngifike emhlanganweni wami olandelayo ngesikhathi.
Izaziso Zokucindezela I-imeyili - uma u-oda kusuka ku-Apple, uthola izaziso ze-imeyili eziphoqayo ezikukwazisa ukuthi i-oda lakho lifakwe nini futhi lisendleleni eliya kuyo.
I-OneSignal inikeza ezinye izinto ezinhle ngaphandle kwezinketho ze-cross-platform nezintengo ezinolaka:
Ukusethwa Kwemizuzu eyi-15 - Ubufakazi bamakhasimende bathi abakholelwa ukuthi bekulula kangakanani ukuqala.
Ukulandelela Kwangempela - Bheka ukuguqulwa kwezaziso zakho nama-imeyili ngesikhathi sangempela.
I-Scalable - Izigidi zabasebenzisi? Sesizimbozile zonke. Sisekela amadivayisi amaningi nawo wonke ama-SDK amakhulu.
Imilayezo Yokuhlola ye-A / B - Thumela imilayezo emibili yokuhlola kusethi engaphansi yabasebenzisi, bese uthumela engcono kokunye.
Ukuqondiswa kwesigaba - Dala izaziso ezenziwe zaba ngezakho nama-imeyili, futhi uzilethe kumsebenzisi ngamunye ngesikhathi esifanele sosuku.
Ukulethwa Okuzenzakalelayo - Setha bese ukhohlwa. Thumela ngokuzenzakalela izaziso ezifanele kubasebenzisi.
Ngokungeziwe ku-API enamandla, I-plugin ye-WordPress, kanye namakhithi wokuthuthukisa ama-software (ama-SDKs) ukuhlanganisa kalula, i-OneSignal inikeza isikhombimsebenzisi esihle kakhulu sabathengisi ukuze nabo bathumele izaziso zabo zohlelo lokusebenza. Banikela ngokuhlanganiswa kwebhokisi ne-SquareSpace, Joomla, Blogger, Drupal, Weebly, Wix, Magento, neShopify.
Bhalisela Mahhala kwa-OneSignal
Tags: izaziso ze-test testBloggerisaziso sesiphequluliizaziso ze-cross-platform pushisaziso sedeskithophuDrupalI-joomlaMagentoisaziso sohlelo lokusebenza lweselulaisikhungo sezazisoenhlePhusha apiisaziso sokucindezelaPush isaziso apiCindezela i-plugin yesazisoukulandela ngomkhondo isikhathi sangempelaisaziso se-safariizaziso zohlelo lokusebenza ezingahlukanisekiizaziso zohlelo lokusebenzathengasquaeveracekubangele i-imeyiliisaziso sewebhusibindekileWixplugin wordpress
Izikhiye Ezintathu Zokuxazulula Inkinga Yezobuchwepheshe Yezokumaketha
I-People.ai: Vula Amandla Wobuhlakani Bokufakelwa Kwamaqembu Wakho Wokuthengisa, Wokumaketha, NamaKhasimende Wempumelelo